Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK | Somali National Television - sntv.so
Home SAWIRO Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK
Madaxwayana Jamhuuriyada Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmajo ayaa kulan xog waraysi ah la yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka UK .
Kulanka waxaa kaloo ka qeyb galay Madaxda dowlag goboleedyada dalka, iyadoo ay ka soo qeyb galeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka kale ee Midowga Yurub.
Kulanka ayaa ahaa mid Jaaliyadda looga xogwareysanayay doorka ay ku leeyihiin ka qeyb qaadashada dib u dhiska dalka.
Madaxweynaha Dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, Koonfurgalbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle oo goobta si wada jir ah uga hadlay ayaa tilmaamay inay dhankooda diyaar u yihiin la shaqeynta dowladda Federaalka ah, Jaaliyadduna looga fadhiyo inay gacan siiyo dowladooda.
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay xafladda ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda la garab istaago, isla markaana la iska dhaafo qabiilka iyo qurunkiisa.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay ku mideysan yihiin sidii dalka loogu soo dabaali lahaa amni iyo nabadgelyo, isla markaana maleeshiyaadka Al-Shabaab laga saaro guud ahaan dalka.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa balan qaaday in siyaasad mideysan oo aan is qab qabsi laheyn ku shaqeyn doonaan, taasna laga dareemi karo wadajirkooda maanta.
Faadumo Faandhe oo ka mid ah howlwadeenada Telefishinka Qaranka ee UK ayaa sheegtay in shirka uu Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed uu ku soo idlaaday guul, isla markaana Jaaliyaddu ay balan qaadeen inay door muuqdo ka qaadan doonaan horumarka dalka.
Sawir Qaade Cadbiraxmaan Soomaali
Previous articleMadaxweynaha oo ka qeyb galay shir looga hadlayay doorka Qurbo joogta ee Dalka
Next articleShir caalami ah oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ka furmaya London